တစျခုမှာဘဝက: င်းကိုမျှဝေမည် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Michaella • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jessica Dunson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thank you for sharing this message. I neededaconfirmation from God about sharing His gospel with others at my own University and I received it through this message. I truly needed this. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
Adrienne Kelly • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Brad Ball • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Olli Pamplin • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်